Qodobo xasaasi ah oo laga soo saaray fullinta qorshaha amniga magaalada Muqdisho (AKHRISO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Qodobo xasaasi ah oo laga soo saaray fullinta qorshaha amniga magaalada Muqdisho (AKHRISO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumada federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ku booriyay shacabka Soomaaliyeed inay hay’adaha amniga kala shaqeeyaaan sugida amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Hay’adaha amniga ayaa iyagoo ka duulaya go’aamadii golaha wasiirada ee 11-kii bishaan May 2017 waxey diyaariyeen barnaamijyadii ay ka mid ahaayeen;
1. In la xareeyey ciidankii isku-dhafka ahaa ee howlgalka xasilinta caasimadda, oo isugu jira Boliis, XDS & nabad-sugid, kuwaas oo leh hal talis oo leh hoggaan mideysan.
2. Maamulka gobolka Banaadir oo u diyaar garoobay isku-dubaridka sidii ciidanka uga howlgali lahaayeen caasimada.
3. Gobolka Banaadir oo hirgeliyey go’aankii ahaa inaan gaadiidka la dhigan karin wadada Makka Al-Mukaramma oo gobolka iyo ciidanka taraafikada ay howlgalkooda bilaabeen.
4. Maamulka gobolka oo hirgeliyey golaha ammaanka ee gobolka Banaadir oo wax-weyn ka taraya sidii caasimada amnigeeda uu u noqon lahaa mid la isku haleyn kara
5. Ciidanku waxey kaloo diyaariyeen qorshihii lagu hirgelin lahaa in caasimadda looga mamnucayo ciidamada hubeysan iyo gaadiidka dagaalka ee aan ku jirin:-
a. Howlgallada lagu xasilinayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka
6. Sidoo kale ciidanku waxey diyaariyeen qorshihii looga mamnuucayey dhammaan qof kasta oo ay ku jiraan mas’uuliyiinta dowladda in magaalada Muqdisho ay ku dhex wataan illaalo ka badan 4 askari gaari kasto iyo ugu badnaan 2 gaari, mana qaadan karaan qori ka wayn AK47.
7. Ciidanka booliska oo diyaariyay qorshihii ay ku dhisayeen ciidamo gaar ah oo ilaaliya madaxda qaranka iyo goobaha muhiimka ah ee dowladda.
12. Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka howlgalaya abaabulka & baraarujinta dadweynaha iyagoo kaashanaya wasaarada warfaafinta, bulshada qeybaheeda kala duwan, iyo hay’adaha amniga.
13. Wasaarada warfaafinta ee dowladda federaalka wuxuu mas’uul ka ahaan doonaa:-